Dowladda dhexe iyo ismaamullada oo ku heshiiyay dib u furka dhaqaalaha dalka – Radio Damal
Dowladda dhexe iyo ismaamullada oo ku heshiiyay dib u furka dhaqaalaha dalka
Kaddib shir maanta ka dhacay madaxtooyada wadanka looga arrimiyo ee State House oo uu shir guddoomiyaha madaxweyne Uhuru Kenyatta ayay dowladda dhexe iyo ismaamullada ku heshiiyeen shuruudaha lagu xiraya dib u furka dhaqaalaha wadanka.
Waxay labada dhinac isla meel dhigeen tallaabooyin ku saabsan la tacaalidda cudurka Covid-19 oo lagu saleynaya geedisocodka dib loogu furaya howlaha ganacsiga.
Tallaabooyinkan ayaa looga gol leeyahay in Kenyaanka looga badbaadiyo saameyn dhaqaale , caafimaad iyo mid bulsho oo ka dhalata Covid-19 .
Sida lagu xusay bayaan ka soo baxay State House ,waxyaabaha la isku afgartay waxaa ka mid ah in muddo bil gudaheed ah la helo 30,500 oo ah sariirada u gaarka ah bukaannada cudurka looga shakiyo guud ahaan dalka.
Kalfadhiggan ayaa ahaa midkii saddexaad ee isku dubaridka howlaha dowladda dhexe iyo dowlad deegannada waxaana laga soo saaray in ismaamul kasta uu diyaariyo 300 oo sariiro gaar ah si loola tacaalo xaaladaha sii kordhaya ee coronavirus.
Shirka uu sido kale ka qeyb galay ku xigeenka madaxweynaha dalka Dr. William Ruto ayaa ismaamullada looga dalbaday inay dib u eegis ku sameyaan qorshayasha dhaqaale iyo istaraatiijiyadeed ee sannadka 2020 ilaa 2021-ka si ay ugu biiriyaan tallaabooyinka looga hor tagaya sido kalena lagu xakameynaya cudurka Covid-19.
Sido kale waxaa maanta heshiis lagu gaaray in golaha barasaabyada ismaamullada ee COG laga qeyb geliyo wada hadallada uu wado golaha diimeed ee isku dhafka ah.
Waxaa sido kale la iska gartay in golaha COG uu qeyb ka noqdo wada hadallada ka dhex socdo saamileyda tacliinta ee ku saabsan dib u furka dugsiyada wadanka.
Maalmo ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta uu amar ku bixiyay in bartamaha bisha sidedaad la soo saaro jadwal sannadeedka waxbarashada si bisha sagalaad loo furo goobaha tacliinta ee dalka.
Guddoomiyaasha ismaamullada iyo mas’uuliyiinta dowladda dhexe ayaa ku heshiiyay inay mar kale kulmaan maalinka Arbacada ee toddobaadka soo socdo.
Madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ayaa labada heer ee dowladda ugu baaqay inay si dhow uga wada shaqeyaan sidii xal wax ku ool ah loogu heli lahaa saameynta caafimaad iyo midda dhaqaale ee uu sababay cudurka Covid-19 .
Hoggaamiyaha dalka ayaa sheegay in dhibaatadda dalka ka taagan ee cudurka ay tahay fursad lagu sii wanaajin karo daryeelka caafimaad ee wadanka.
Wasiirka wasaaradda caafimaadka Mr. Mutahi Kagwe ayaa dhankiisa barasaabyada ku ammaanay inay si dhow ula shaqeyeen wuxuuna carrabka ku adkeeyay inay lagama maarmaan tahay in la is-kaashado si horumar looga gaaro la dagaalanka cudurka Covid-19.
Wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dalka Mr. Ukur Yattani ayaa isna sheegay in wasaaradda uu hoggaamiyo ay ku guda jirto qiimeynta ku aaddan saameynta dhaqaale ee uu yeeshay Covid-19 .
Sii hayaha xilka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Patrick Amoth ayaa xusay in bulshada oo diyaar garoow buuxa sameysay ay kaalin weyn ka qaadanayso in laga guulaysto cudurka.